West Coast of Ireland, dia fitsangatsanganana ilaina (II) | Vaovao momba ny dia
Enric Gili | | Dublin, General, Irlandy, Inona no ho hita, Tsangatsangana
Androany dia holazaiko aminao ny tapany faharoa amin'ny diako mankany amin'ny morontsiraka andrefan'i Irlanda. Azonao atao ny mamaky ity voalohany amin'ireto rohy manaraka ireto «West Coast of Ireland, dia fitsangantsanganana ilaina (I)".
Raha tamin'ny andro voalohany aho dia nankany amin'ny Cliff of Moher sy ny tanàna manodidina, atsimon'ny tanànan'i Galway, amin'ny manaraka Nandeha nianavaratra foana aho.
Ny avaratra sy andrefan'i Galway dia tsy dia mpizaha tany loatra fa noho ny tsiriko dia tsara tarehy kokoa. Faritra be tendrombohitra izy io, feno farihy sy tanàna kely. Tao no nahitako an'i Irlandy tena izy.
1 Andro 2: làlana Kylemore Abbey sy làlambe N-59 any Irlandy
2 Andro 3: Leenaun, Westport ary Newport amin'ny alàlan'ny R-336
Andro 2: làlana Kylemore Abbey sy làlambe N-59 any Irlandy
Ny andro faharoa nandehanako namaky ny Atlantika Irlandy dia notendreko handeha io ny lalana N-59 iray manontolo avy any Galway mankany amin'ny Abbey Kylemore.
Ny tanjoko dia ny hitsidika ny lapa ary hisakafo ao Clifden, hahafahako manao ny zava-drehetra tsy maimaika dia nandao ny trano fandraisam-bahiko aloha be aho, tamin'ny 7 maraina dia efa nitondra fiara aho.
Hatramin'ny niandohan'ny làlana dia lasa a fitohizan'ny ahitra sy tendrombohitra maitso, ho an'ireo tia natiora toy izany, fampisehoana an-tsary.
Vantany vao niampita ny tanànan'i Maam Cross aho ary afaka minitra vitsy dia noraisiko ilay Lalan'ny distrika R344, izay manodidina an'i Loch Inagh no betsaka ary tendrombohitra avoavo (be oram-panala ireny amin'ny volana Desambra). Fahombiazana lehibe ny familiana io lalana io. Raha te-hitsidika ny tranoben'ny kylemore ianao dia miangavy anao hihodina amin'ity lalana ity. 15Km natiora 100%, ondry miampita ny arabe sy ny sisiny ary ny sisin'ny arabe, saika tsy misy fiara. Fomba iray hankafizana ny tontolo sy ny fandriam-pahaleman'ny faritra.
Ity lalana mihodina ity dia mitondra antsika mivantana any Kylemore. Safidy iray hafa ny manohy amin'ny làlambe (izay efa nampiasako niverina tany Galway).
La Kylemore Abbey dia tranobe taloha ary trano nonenan'i Mitchell Henry (dokotera anglisy mpandraharaha sy mpandraharaha nifindra tany Irlandy) nanorina tany tapaky ny taonjato faha-XNUMX ary avy eo navadika ho masera vita amin'ny rongony hatramin'ny 2010.
Azonao atao izao ny mitsidika ny trano misy azy manontolo, ireo zaridaina Victoria mahavariana, ny mausolé an'ny fianakaviana, ny fiangonana neo-Gothic ary ny efitrano sasany ao amin'ny trano mimanda. Tena toy ny lapa vita amin'ny sarimihetsika Harry Potter izany.
Ny zavatra iray mety hahagaga anao dia ny fiovan'ny sehatr'ity tranonkala ity. Amin'ny ankapobeny dia tsy dia misy hazo firy any Andrefana Andrefana ary feno olona eto. Ny zava-drehetra dia samy manana ny fanazavany, ny ala manodidina an'i Kylemore dia hazo ambolena mandritra ny fananganana azy io.
Tsy maimaim-poana ny fidirana, ny vidiny dia manodidina ny 8 ka hatramin'ny 12 Euros isan'olona, ​​hitanao ny zava-drehetra ao anatin'ny antsasaky ny andro. Heveriko fa tena mendrika izany. Ny vala dia misy bar sy trano fisakafoanana raha sanatria ka tsy manam-potoana hahatongavana any Clifden ianao.
Tamin'ny faran'ny fitsidihako tany Kylemore Nanohy ny lalana N-59 mankany amin'ny tanàna amoron-dranomasina ao Clifden aho, tanàna amoron-dranomasina tsara tarehy izay nisakafoanana sy nandehanako. Ny tolakandro dia nanohy ny diako niverina tany Galway aho.
Tena akaikin'ny abbey ny Connemara National Park, iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana tsara indrindra any Irlandy, tehezan-tendrombohitra malefaka sy ny tontolo miavaka. Raha manam-potoana ianao dia manokana andro 1 hitsidihana ny faritra toy ny nataoko sy andro hitsangatsangana hamaky an'i Connemara.
Andro 3: Leenaun, Westport ary Newport amin'ny alàlan'ny R-336
Andro mahafinaritra iray hafa amin'ny landscapes. Nanomboka ny diako indray aho tamin'ny làlana N-59 ary tao an-tanànan'ny Maam Cross dia nitondra ny lalana mihodina aho a lalana eo an-toerana R-366 lalana Maum sy Leenaun.
Raha ny andro talohan'ny nahitako fiara vitsy sy olona vitsy dia vitsy kokoa aza ny androany. Raha tsy nisy olana dia afaka nanakana ny fiara teo afovoan-dalana aho haka sary ny zavatra hitako, ary nanaloka ahy indray ny tontolo. Ondry maimaimpoana nolokoana loko, farihy kely amin'ny lafiny iray, tendrombohitra, ala, ala maitso, ... tsy mijanona ho an'ny saiko.
Ny tanjona dia ny hahatratra ny tanànan'ny ranomasina ao Leenaun. Toa any amin'ny fjord norveziana isika, ny ranomasina dia miditra ao amin'ny Kilometers sy Kilometers mankany afovoan-tany toy ny vavahady, tanàna toa nalaina tamin'ny fotoana hafa.
Leenaun dia tanàna fanjonoana kely dia kely, toerana tsara hananana pint amin'ny iray amin'ireo trano fisotroana misy azy ary hihainoana ny Gaelic. Izy io dia iray amin'ireo zoro farany eto amin'ny firenena izay mbola miteny an'io fiteny io ny olona.
Rehefa vita ny fitsidihako an'ity tanàna kely ity dia nizotra nianavaratra namakivaky ny Làlana N-59, ny tanjoko manaraka, Westport.
Westport dia tanàna lehibe kokoa sy mavitrika kokoa (mponina mihoatra ny 5000), akaikin'ny ranomasina ary misy manintona manokana. Nanapa-kevitra ny hisakafo any aho. Tsy misy mahavariana amin'izany, fa tiako be izany.
Ny tolakandro dia nankany aho Newport, kilaometatra vitsivitsy. Tanàna kely tena tsara feno tantara. Hanasongadinana ny viaduct, ny fiangonana romana ary ny Castle Carrickahowley.
Tamin'ny faran'ny fitsidihako tany Newport niverina tany Galway indray.
Tsy isalasalana fa manome zavatra lehibe 3 ny andrefan'i Irlandy: Cliff of Moher sy ny morontsiraka amin'ny ankapobeny, Kylemore Abbey ary ny natiora rehetra amin'ny ankapobeny. Manoro hevitra anao aho handeha amin'ity faritra ity ary handray lalana mangina, mankafy ny tontolo ary mitsidika tsikelikely ireo teboka mahaliana manokana, miala sasatra amin'ny fiadanam-po miaina ary mitsangatsangana any amin'ilay faritra.
Aza mandeha any Irlandy raha tsy mahita ny andrefana, mandany andro farafahakeliny 4 andro hahitanao azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Dublin » West Coast of Ireland, dia fitsangatsanganana ilaina (II)